၂၀၂၀ ဓါတု နိုဘဲလ်ဆု အပိုင်း ၁ - မျိုးဗီဇ တည်းဖြတ်နည်းသစ်
မျိုးဗီဇ DNA ကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နေရာအစိတ်ပိုင်းမှာ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ဖို့ တိတိကျကျ ဖြတ်တောက်ပေးနိုင်တဲ့ မျိုးဗီဇကပ်ကျေး ခေါ် Crispr-Cas9 "genetic scissors" ကို တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင် ၂ ဦးကို ၂၀၂၀ အတွက် ဓါတုဗေဒ နိုဘယ်ဆု ပူးတွဲပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ နာဆာသိပ္ပံပညာရှင် ဒေါက်တာ ပဒေသာတင်က ပြောပြပေးမှာပါ။
သက်ရှိတွေရဲ့ မျိုးဗီဇ DNA ကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နေရာအစိတ်အပိုင်းမှာ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ဖို့ တိတိကျကျ ဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့
မျိုးဗီဇကပ်ကျေး လို့ခေါ်တဲ့ Crispr-Cas9 "genetic scissors" ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ အမျိးသမီးသိပ္ပံပညာရှင် ၂ ဦးကို ၂၀၂၀ အတွက် ဓါတုဗေဒ နိုဘယ်ဆု ပူးတွဲ ပေးအပ်ခဲ့ ပါတယ်။
သူတို့ဟာ သိပ္ပံဆိုင်ရာမှာ ထူးခြားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ မျိုးဗီဇတည်းဖြတ်တဲ့ gene editing နည်းသစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိတာလို့ နာဆာ သိပ္ပံပညာရှင် ဒေါက်တာ ပဒေသာတင်က ပြောပါတယ်။
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ် Berkeley က (Howard Hughes Medical Institute) က ပါမောက္ခ Jennifer Doudna ရယ် ပြင်သစ်နိုင်ငံသူ ဖြစ်တဲ့ ဂျာမဏီက (Max Planck Unit for the Science of Pathogens ) ရောဂါဗေဒဌာနက သုတေသနပညာရှင် ဒေါက်တာ Emmanuelle Charpentier သူတို့ ၂ ယောက်တွဲပြီး gene editing ဆိုတဲ့ မျိုးဗီဇ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဓါတုဗေဒ နိုဘဲလ်ဆု ရတာဖြစ်ပါတယ်။”
မေး။. ။“gene editing ဆိုတာ ဘာလဲပြောပြပေးပါ။”
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“ကျနော်တို့ ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကလပ်စည်း ဆဲလ်တွေက သန်း ထောင်ပေါင်း မရေမတွက်နိုင်အောင် များစွာ ရှိပါတယ်။ ဆဲလ် တွေမှာ မော်လီကျူးး အတန်းလေးပါလာတယ်။ အဲဒါကို DNA လို့ခေါ်ပါတယ်။ deoxyribonucleic acid ။ အဲဒါကို Francis Crick နဲ့ James Watson တို့က ၁၉ ၆၀ လောက်မှာ စတွေ့တာပါ။ ဒီပုံစံလေးက။ သူ့ပုံစံလေးက ဘာနဲ့ သွားတူ သလဲ ဆိုတော့ ထန်းတက်တဲ့ လှေကားလို ပေါ့နော်။ လက်ရမ်းမပါတဲ့ လှေကားလေးနဲ့ တူတယ်။ ဘေးမှာက ဘာလဲ ဆိုတော့ နိုက်ထရိုဂျင် မော်လီကျူး ပါတယ်။ အဲဒီ ၂ ခုကို အလယ်မှာ တွဲထားတယ်။ အဲဒီ လှေကားပုံလေးကို လိမ်လိုက်ရင် သူ့ပုံစံက double helix လို့ခေါ်တယ်။ ၂ ပင်လိမ်နေတဲ့ အနေထား။ အဲဒီလို လိမ်လိုက်တဲ့ ပုံစံလေး အတိုင်း ဒီဆဲလ်လေးတွေက ဖွဲ့စည်း ထားတာပါ။ ဒီ ဆဲလ် ထဲမှာ DNA chromosome တွေက ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ခရိုမိုစုန်း ကလေးတွေက ချို့ယွင်းသွားတယ်။ ပျက်စီးသွားတယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဒါမှမဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ် ဝင်လာတဲ့ အခါကျရင် ရောဂါရတယ်။ နောက် တခုကလည်း ဒီခရိုမိုစုန်း ကလေးတွေကနေ၊ မျက်လုံးမှေးတယ်၊ ဆံပင်နက်တယ်၊ ဆံပင် ရွှေရောင်ရှိတယ်။ အရပ်ရှည်တယ်။ အရပ်ပုတယ်။ နောက်မွေးကတည်းက ဗီဇ မကောင်းဘူး။ဗီဇ ကောင်းတယ် ဆိုတာက ဒါကနေ ဆုံးဖြတ်သွားတာပါ။
gene editing ဆိုတာက ဘာလဲ ဆိုတော့ ဗီဇ တည်းဖြတ်တာ ပေါ့နော်။ တည်းဖြတ်တယ် ဆိုတာ တကယ့်တည်းဖြတ်တဲ့ အတိုင်းပဲ သူ့ကို မော်လီကျူး ကပ်ကျေး - molecular scissors - အပြင်ကနေပြီး မော်လီကျူး အရွယ်ရှိတဲ့ RNA လို မော်လီကျူး အစုလေးကို ထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ သူနဲ့ ကိုက်တဲ့ နေရာမှာ သွားပြီးတော့ ဖြတ်ခိုင်းလိုက်တာ။ အဲဒါ gene editing တည်းဖြတ်တယ်ဆိုတာပါ။ ပြီးတော့မှ အပြင်ကနေပြီးတော့မှ မကောင်းတဲ့ ဗီဇ ပါတဲ့ DNA ကိုဖယ်၊ ပြီးတော့ ကောင်းတဲ့ဟာ ဒါမှမဟုတ် မျိုး မတူတဲ့ဟာကို ပြန်ပြီးတော့ ထည့်ပေးလိုက်လို့ ရှိရင် သူ့ အလိုလို ပြန်တွဲပြီးတော့ မော်လီကျူး chain လေး အဲဒါ DNA အသစ်ကလေး ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီလို အသစ်ကလေး ပြန်ဖြစ်သွားတာနဲ့ ရောဂါကုသွားလို့ရတယ်။ မျိုးရိုးကို ပြောင်းပစ်လိုက်လို့ ရတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်တာကို နိုဘဲလ်ဆု ပေးတာပါ။”
မေး။. ။“၂၀ ရာစု အစပိုင်းကတည်းက တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ gene editing လုပ်နည်းနဲ့ အခု သူတို့တွေ့တဲ့ နည်း ဘာကွာပါသလဲ။
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“သူတို့ ဒါကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ စတွေ့တာပါ။ ဒီ ဗီဇ gene တည်းဖြတ်တာကို သုတေသနလုပ်တာက ၁၉ ၉ ၀ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀ ရာစုလောက်ကတည်းက စလုပ်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းက လုပ်ရတာ ခဲယဉ်းတယ်။ အတိအကျ မရဘူး။ အတိအကျ မရတဲ့ အတွက် ကိုယ်လိုချင်တဲ့၊ ဗီဇ မျိုးရိုး၊ မော်လီကျူးအတန်ူလေးကို ထည့်လိုက်ပေမယ့် သူက ရောက်ချင်တဲ့ နေရာ ရောက်တယ်။ အဲလိုဆိုတော့ အချိုးမကျဘူး။ လိုချင်တဲ့ အဖြေ ချက်ချင်း မရဘူး။ နောက်တခုက အဲဒီလိုမျိုး ဗီဇကို တည်းဖြတ်ဖို့ အတွက် ပိုက်ဆံသိပ်ကုန်တယ်။ အရင်တုန်းကဆို ဗီဇဆဲလ်လေး တခု ရဖို့ ထောင်နဲ့ချီပြီး ကုန်ပါတယ်။ နောက် သုတေသနလုပ်တဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်း တွေမှာပဲ လုပ်ရတယ်။
သူတို့ထွင်လိုက်တဲ့ဟာက ဘယ်လောက် မြန်သွားသလဲ ဆိုတော့ နာရီပိုင်း အတွင်းမှာ မျိုးရိုးဗီဇ အသစ်ကလေးကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဖန်တီးယူလို့ရတယ်။ ပြောင်းချင်တဲ့ ဗီဇကို အပြင်မှာ မွေးယူပြီးတော့ DNA ထဲကို အမြန်ဆုံး ထည့်လို့ရအောင် လုပ်ပေးလို့ ရတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဗီဇကိုလည်း ရှာပြီးတော့ အမြန်ဆုံး တွဲပေးလို့ရအောင် သူတို့က နည်းသစ် ထွင်လိုက်တာ။ သူတို့ထွင်တာက သဘာဝ ကနေပြီးတော့ အပြင်က ဝင်လာတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို ဘယ်လိုခုခံ ကာကွယ်မလဲ ဆိုတာ သဘာဝက ရှိပြီးသား။ အဲဒီ သဘာဝ ပုံစံ အတိုင်း ရအောင် သူက အဲဒီနည်းကိုယူပြီးတော့ သဘာဝ အတိုင်း ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဆဲလ်ပုံစံကို DNA ကို သူက ထည့်ပေးလိုက်တာ။ အဲဒီအခါ သူက အတွဲလိုက်ကြီး ချက်ချင်း သွားပြီးတော့ ဖြတ်လည်းဖြတ်၊ ကပ်လည်းကပ် ဆိုတော့ အမြန်ဆုံးပေါ့ သူတို့ ပြင်လို့ ရသွားတာပါ။
မေး။. ။“သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ နည်းဟာ လူသားတွေ အတွက် အကျိုးသိပ်ရှိပေမယ့် မှားယွင်းစွာ အသုံးချရင်တော့ အန္တရာယ်က သိပ်ကြီးပါတယ်။
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“ဘာပြဿနာ ပေါ်လာလည်း ဆိုတော့ မျိုးရိုးဗီဇ သန္ဓေသားကိုပါ ပြောင်းလို့ ရတယ်။ gene tharapy တင်မဟုတ်တော့ဘူး။ gene editing ကနေ genetic code ကြီး ပေါ့နော်။ လူတွေရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇကို ပြောင်းလို့ရတဲ့ အတွက် သူတို့က ဒီဟာကို စတွေ့တွေ့ချင်းမှာ သူတို့ ၂ ဦးက ဆေးပညာရှင်တွေ၊ နိုဘဲလ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကို သူတို့က အမြန်ဆုံးသွားပြီးတော့ အကြောင်းကြားတယ်။ ကျမတို့ ၂ ယောက်တော့ ဒါတွေ့ပြီ။ တွေ့တဲ့ အခါကျတော့ လူသားကို အကျိုးပြုဖို့ အတွက်ကတော့ အများကြီးပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒါကို မကောင်းတဲ့ သူက အသုံးချလိုက်ပြီး မျိုးရိုးစိတ်တမျိုး လူတွေမှာ လုပ်လိုက်လို့ ရှိရင် - gene တည်းဖြတ်တဲ့ ဟာနဲ့ထည့်ပြီး သန္ဓေသားကို မွေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်း ရပြီ။ အဲဒါအတွက်ကို regulate လုပ်ပေးပါ ဆိုပြီး အမြန်ဆုံး အကြောင်းကြားရပါတယ်။ တခါတည်း တကမ္ဘာလုံးကို သိမ့်သိမ့် လှုပ်သွား နိုင်လောင်အောင်ပေါ့နော်၊ မျိုးရိုးဗီဇကို ပြောင်းလို့ရနိုင်တဲ့ နည်းသစ်ကို ထွင်လိုက်တဲ့ဟာ၊ မြန်လည်မြန်တယ်။ အခုဆို အပြင်မှာကို ဝယ်လို့ရပြီ။ အဲဒီတော့ လူတွေူက အကုန်လုံး သုံးကြပြီ။”
မေး။. ။“ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာ အသုံးကျလည်း ပြောပြပေးပါ။”
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။. ။“ဗီဇကို တည်းဖြတ်နိုင်တဲ့ဟာ ပေါ့နော်။ ဒီဆဲလ်တွေထဲမှာ ရှိတဲ့ ဗီဇကိုတည်းဖြတ် နိုင်တဲ့ဟာက သိပ်မြန်ပြီးတော့ သိပ်ပြီးထိထိရောက်ရောက် လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် အသုံးချလို့ရတာက အများကြီးပါပဲ။”
ဒေါက်တာပဒေသာတင်ပါ။ နောက်တပတ်မှာတော့ သူတို့ ၂ ဦး ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ နည်းသစ်ကို ဘယ်နေရာ တွေမှာအသုံးချနိုင်တယ် ဆိုတာကို ဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်ဆိုတာ တင်ပြရင်း ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပွံနဲ့ နည်းပညာ ကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
သကျရှိတှရေဲ့ မြိုးဗီဇ DNA ကို ကိုယျလိုခငျြတဲ့ နရောအစိတျအပိုငျးမှာ ပွောငျးလဲပေးနိုငျဖို့ တိတိကကြ ဖွတျတောကျနိုငျတဲ့
မြိုးဗီဇကပျကြေး လို့ချေါတဲ့ Crispr-Cas9 "genetic scissors" ကို ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့တဲ့ အမြိးသမီးသိပ်ပံပညာရှငျ ၂ ဦးကို ၂၀၂၀ အတှကျ ဓါတုဗဒေ နိုဘယျဆု ပူးတှဲ ပေးအပျခဲ့ ပါတယျ။
သူတို့ဟာ သိပ်ပံဆိုငျရာမှာ ထူးခွားတဲ့ ပွောငျးလဲမှုတှကေို ဖွဈစနေိုငျတဲ့ မြိုးဗီဇတညျးဖွတျတဲ့ gene editing နညျးသဈကို ရှာဖှတှေရှေိ့တာလို့ နာဆာ သိပ်ပံပညာရှငျ ဒေါကျတာ ပဒသောတငျက ပွောပါတယျ။
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“ကယျလီဖိုးနီးယား တက်ကသိုလျ Berkeley က (Howard Hughes Medical Institute) က ပါမောက်ခ Jennifer Doudna ရယျ ပွငျသဈနိုငျငံသူ ဖွဈတဲ့ ဂြာမဏီက (Max Planck Unit for the Science of Pathogens ) ရောဂါဗဒေဌာနက သုတသေနပညာရှငျ ဒေါကျတာ Emmanuelle Charpentier သူတို့ ၂ ယောကျတှဲပွီး gene editing ဆိုတဲ့ မြိုးဗီဇ နဲ့ပတျသကျတဲ့ ဓါတုဗဒေ နိုဘဲလျဆု ရတာဖွဈပါတယျ။”
မေး။. ။“gene editing ဆိုတာ ဘာလဲပွောပွပေးပါ။”
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“ကနြျောတို့ ကိုယျခန်ဓာထဲမှာ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ ကလပျစညျး ဆဲလျတှကေ သနျး ထောငျပေါငျး မရမေတှကျနိုငျအောငျ မြားစှာ ရှိပါတယျ။ ဆဲလျ တှမှော မျောလီကြူးး အတနျးလေးပါလာတယျ။ အဲဒါကို DNA လို့ချေါပါတယျ။ deoxyribonucleic acid ။ အဲဒါကို Francis Crick နဲ့ James Watson တို့က ၁၉ ၆၀ လောကျမှာ စတှတေ့ာပါ။ ဒီပုံစံလေးက။ သူ့ပုံစံလေးက ဘာနဲ့ သှားတူ သလဲ ဆိုတော့ ထနျးတကျတဲ့ လှကေားလို ပေါ့နျော။ လကျရမျးမပါတဲ့ လှကေားလေးနဲ့ တူတယျ။ ဘေးမှာက ဘာလဲ ဆိုတော့ နိုကျထရိုဂငျြ မျောလီကြူး ပါတယျ။ အဲဒီ ၂ ခုကို အလယျမှာ တှဲထားတယျ။ အဲဒီ လှကေားပုံလေးကို လိမျလိုကျရငျ သူ့ပုံစံက double helix လို့ချေါတယျ။ ၂ ပငျလိမျနတေဲ့ အနထေား။ အဲဒီလို လိမျလိုကျတဲ့ ပုံစံလေး အတိုငျး ဒီဆဲလျလေးတှကေ ဖှဲ့စညျး ထားတာပါ။ ဒီ ဆဲလျ ထဲမှာ DNA chromosome တှကေ ရှိပါတယျ။ အဲဒီ ခရိုမိုစုနျး ကလေးတှကေ ခြို့ယှငျးသှားတယျ။ ပကျြစီးသှားတယျ ဆိုလို့ရှိရငျ ဒါမှမဟုတျ ဗိုငျးရပျဈ ဝငျလာတဲ့ အခါကရြငျ ရောဂါရတယျ။ နောကျ တခုကလညျး ဒီခရိုမိုစုနျး ကလေးတှကေနေ၊ မကျြလုံးမှေးတယျ၊ ဆံပငျနကျတယျ၊ ဆံပငျ ရှရေောငျရှိတယျ။ အရပျရှညျတယျ။ အရပျပုတယျ။ နောကျ မှေးကတညျးက ဗီဇ မကောငျးဘူး။ဗီဇ ကောငျးတယျ ဆိုတာက ဒါကနေ ဆုံးဖွတျသှားတာပါ။
gene editingဆိုတာက ဘာလဲ ဆိုတော့ ဗီဇ တညျးဖွတျတာ ပေါ့နျော။ တညျးဖွတျတယျ ဆိုတာ တကယျ့တညျးဖွတျတဲ့ အတိုငျးပဲ သူ့ကို မျောလီကြူး ကပျကြေး - molecular scissors - အပွငျကနပွေီး မျောလီကြူး အရှယျရှိတဲ့ RNA လို မျောလီကြူး အစုလေးကို ထညျ့ပေးလိုကျပွီးတော့ သူနဲ့ ကိုကျတဲ့ နရောမှာ သှားပွီးတော့ ဖွတျခိုငျးလိုကျတာ။ အဲဒါ gene editing တညျးဖွတျတယျဆိုတာပါ။ ပွီးတော့မှ အပွငျကနပွေီးတော့မှ မကောငျးတဲ့ ဗီဇ ပါတဲ့ DNA ကိုဖယျ၊ ပွီးတော့ ကောငျးတဲ့ဟာ ဒါမှမဟုတျ မြိုး မတူတဲ့ဟာကို ပွနျပွီးတော့ ထညျ့ပေးလိုကျလို့ ရှိရငျ သူ့ အလိုလို ပွနျတှဲပွီးတော့ မျောလီကြူး chain လေး အဲဒါ DNA အသဈကလေး ပွနျဖွဈသှားတယျ။ အဲဒီလို အသဈကလေး ပွနျဖွဈသှားတာနဲ့ ရောဂါကုသှားလို့ရတယျ။ မြိုးရိုးကို ပွောငျးပဈလိုကျလို့ ရတယျ။ အဲဒါနဲ့ ပတျသကျတာကို နိုဘဲလျဆု ပေးတာပါ။”
မေး။. ။“၂၀ ရာစု အစပိုငျးကတညျးက တှရှေိ့ခဲ့တဲ့ gene editing လုပျနညျးနဲ့ အခု သူတို့တှတေဲ့ နညျး ဘာကှာပါသလဲ။
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“သူတို့ ဒါကို ၂၀၁၄ ခုနှဈမှာ စတှတေ့ာပါ။ ဒီ ဗီဇ gene တညျးဖွတျတာကို သုတသေနလုပျတာက ၁၉ ၉ ၀ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀ ရာစုလောကျကတညျးက စလုပျနပွေီ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီတုနျးက လုပျရတာ ခဲယဉျးတယျ။ အတိအကြ မရဘူး။ အတိအကြ မရတဲ့ အတှကျ ကိုယျလိုခငျြတဲ့၊ ဗီဇ မြိုးရိုး၊ မျောလီကြူးအတနျူလေးကို ထညျ့လိုကျပမေယျ့ သူက ရောကျခငျြတဲ့ နရော ရောကျတယျ။ အဲလိုဆိုတော့ အခြိုးမကဘြူး။ လိုခငျြတဲ့ အဖွေ ခကျြခငျြး မရဘူး။ နောကျတခုက အဲဒီလိုမြိုး ဗီဇကို တညျးဖွတျဖို့ အတှကျ ပိုကျဆံသိပျကုနျတယျ။ အရငျတုနျးကဆို ဗီဇဆဲလျလေး တခု ရဖို့ ထောငျနဲ့ခြီပွီး ကုနျပါတယျ။ နောကျ သုတသေနလုပျတဲ့ ဓါတျခှဲခနျး တှမှောပဲ လုပျရတယျ။
သူတို့ထှငျလိုကျတဲ့ဟာက ဘယျလောကျ မွနျသှားသလဲ ဆိုတော့ နာရီပိုငျး အတှငျးမှာ မြိုးရိုးဗီဇ အသဈကလေးကို ကိုယျ့ဟာကိုယျ ဖနျတီးယူလို့ရတယျ။ ပွောငျးခငျြတဲ့ ဗီဇကို အပွငျမှာ မှေးယူပွီးတော့ DNA ထဲကို အမွနျဆုံး ထညျ့လို့ရအောငျ လုပျပေးလို့ ရတယျ။ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ ဗီဇကိုလညျး ရှာပွီးတော့ အမွနျဆုံး တှဲပေးလို့ရအောငျ သူတို့က နညျးသဈ ထှငျလိုကျတာ။ သူတို့ထှငျတာက သဘာဝ ကနပွေီးတော့ အပွငျက ဝငျလာတဲ့ ဗိုငျးရပျဈတှကေို ဘယျလိုခုခံ ကာကှယျမလဲ ဆိုတာ သဘာဝက ရှိပွီးသား။ အဲဒီ သဘာဝ ပုံစံ အတိုငျး ရအောငျ သူက အဲဒီနညျးကိုယူပွီးတော့ သဘာဝ အတိုငျး ဖွဈအောငျ လုပျပေးလိုကျပွီးတော့ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ ဆဲလျပုံစံကို DNA ကို သူက ထညျ့ပေးလိုကျတာ။ အဲဒီအခါ သူက အတှဲလိုကျကွီး ခကျြခငျြး သှားပွီးတော့ ဖွတျလညျးဖွတျ၊ ကပျလညျးကပျ ဆိုတော့ အမွနျဆုံးပေါ့ သူတို့ ပွငျလို့ ရသှားတာပါ။
မေး။. ။“သူတို့ရှာဖှတှေရှေိ့တဲ့ နညျးဟာ လူသားတှေ အတှကျ အကြိုးသိပျရှိပမေယျ့ မှားယှငျးစှာ အသုံးခရြငျတော့ အန်တရာယျက သိပျကွီးပါတယျ။
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“ဘာပွဿနာ ပျေါလာလညျး ဆိုတော့ မြိုးရိုးဗီဇ သန်ဓသေားကိုပါ ပွောငျးလို့ ရတယျ။ gene tharapy တငျမဟုတျတော့ဘူး။ gene editing ကနေ genetic code ကွီး ပေါ့နျော။ လူတှရေဲ့ မြိုးရိုးဗီဇကို ပွောငျးလို့ရတဲ့ အတှကျ သူတို့က ဒီဟာကို စတှတှေ့ခေ့ငျြးမှာ သူတို့ ၂ ဦးက ဆေးပညာရှငျတှေ၊ နိုဘဲလျသိပ်ပံပညာရှငျတှကေို သူတို့က အမွနျဆုံးသှားပွီးတော့ အကွောငျးကွားတယျ။ ကမြတို့ ၂ ယောကျတော့ ဒါတှပွေီ့။ တှတေဲ့ အခါကတြော့ လူသားကို အကြိုးပွုဖို့ အတှကျကတော့ အမြားကွီးပဲ။ ဒါပမေဲ့ ဒါကို မကောငျးတဲ့ သူက အသုံးခလြိုကျပွီး မြိုးရိုးစိတျတမြိုး လူတှမှော လုပျလိုကျလို့ ရှိရငျ - gene တညျးဖွတျတဲ့ ဟာနဲ့ထညျ့ပွီး သန်ဓသေားကို မှေးလိုကျလို့ရှိရငျလညျး ရပွီ။ အဲဒါအတှကျကို regulate လုပျပေးပါ ဆိုပွီး အမွနျဆုံး အကွောငျးကွားရပါတယျ။ တခါတညျး တကမ်ဘာလုံးကို သိမျ့သိမျ့ လှုပျသှား နိုငျလောငျအောငျပေါ့နျော၊ မြိုးရိုးဗီဇကို ပွောငျးလို့ရနိုငျတဲ့ နညျးသဈကို ထှငျလိုကျတဲ့ဟာ၊ မွနျလညျမွနျတယျ။ အခုဆို အပွငျမှာကို ဝယျလို့ရပွီ။ အဲဒီတော့ လူတှေူက အကုနျလုံး သုံးကွပွီ။”
မေး။. ။“ဘယျလိုနရောမြိုးတှမှော အသုံးကလြညျး ပွောပွပေးပါ။”
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။. ။“ဗီဇကို တညျးဖွတျနိုငျတဲ့ဟာ ပေါ့နျော။ ဒီဆဲလျတှထေဲမှာ ရှိတဲ့ ဗီဇကိုတညျးဖွတျ နိုငျတဲ့ဟာက သိပျမွနျပွီးတော့ သိပျပွီးထိထိရောကျရောကျ လုပျနိုငျတဲ့အတှကျ အသုံးခလြို့ရတာက အမြားကွီးပါပဲ။”
ဒေါကျတာပဒသောတငျပါ။ နောကျတပတျမှာတော့ သူတို့ ၂ ဦး ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့တဲ့ နညျးသဈကို ဘယျနရော တှမှောအသုံးခနြိုငျတယျ ဆိုတာကို ဆကျပွီးပွောပွပေးပါမယျဆိုတာ တငျပွရငျး ဒီသီတငျးပတျအတှကျ သိပ်ပှံနဲ့ နညျးပညာ ကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနားလိုကျပါရစေ။